theZOMI: [mrsorcerer:37553] Fwd: [လူဗိုလ်ဟူသည် ...] Virus ကာကွယ်ရေးအတွက် လမ်းညွှန်၂၃ ချက်
[mrsorcerer:37553] Fwd: [လူဗိုလ်ဟူသည် ...] Virus ကာကွယ်ရေးအတွက် လမ်းညွှန်၂၃ ချက်
Subject: [လူဗိုလ်ဟူသည် ...] Virus ကာကွယ်ရေးအတွက် လမ်းညွှန်၂၃ ချက်
၁။ Anti-virus ဆော့ဖ်ဝဲလ်တွေဟာ မလုံလောက်ပါ။ 'Removal tools' ကိုinstall လုပ်ပါ။ (virus ကာကွယ်ရေး ဆော့ဖ်ဝဲလ် တွေဟာ ပီစီ ကို spyware ဒါမှမဟုတ် adware တွေငြိကပ် ကူးစပ် တဲ့အခါ မဆိုင်သလို လုပ်နေလေ့ ရှိတတ်ပါတယ်။
၃။ Firefox လား? IE လား? သေချာစွာ စဉ်းစားပါ။ (များသောအားဖြင့် spy-ware တွေဟာ အဲဒီလို browser နှစ်ခုအကြား ဗျာများ နေတဲ့ အချိန်မှာ ဝင်လာ တတ်ပါတယ်။ တချို့ website တွေ ဟာ တတ်ပါတယ်။ တချို့website တွေဟာတတ်ပါတယ်။ တချို့ website တွေဟာ IE နဲ့အလွမ်း သင့်ပြီး တချို့ကျတော့ firefox နဲ့မှ အဆင်ပြေ တတ်ကြတဲ့ အတွက် တွေဝေမှုကို လျှော့ချပါ။
၄။ P2P ကွန်ရက်ကို သတိထားပါ။ ('.torrent' တွေကနေ တစ်ဆင့် adware/spyware တွေ ကူးစက်တတ်တာ ခုနောက်ပိုင်းမှာ ပုံပြင် သစ်တွေ ဖြစ်လာနေပါပြီ။ မလိုအပ်ရင် P2P မသုံး ဘဲ ရိုးရိုးသာ download ချပါ။
၁၃။ Keylogger တွေကို ကာကွယ်လို့ ရနိုင်ပါတယ်။ (တကယ်လို့ကိုယ်ပိုင် ဗဟုသုတ နည်းပါး နေရင် keylogger တွေ ရဲ့ သွင်ပြင် လက္ခဏာ တွေကို ရှာဖွေ ဖတ်ရှုပါ။ 'Ctrl+Alt+Del' သုံးစွဲပြီး system မှာ run နေတဲ့ မသင်္ကာတဲ့ 'exe' ဖိုင် မှန်သမျှကို ဖယ်ရှား ပစ်ပါ။ အဲဒီလို ဖယ်ရှား ပစ်ခြင်း အားဖြင့် system ဖိုင်အစစ်တချို့ ဆိုရင် လတ်တလောမှာ အလုပ် မလုပ် တော့တာကလွဲပြီး ဘာမှ မဖြစ်နိုင်ပါ။)
၁၆။ anit-spyware software အခမဲ့ပေးတဲ့ website- ဥပမာအားဖြင့် AVG anit-spyware website ကနေ အခမဲ့ ပေးထား ပါလျက်နဲ့ download ချလို့မရနိုင်တာမျိုးရှိပါတယ်။ (အဲဒါဟာ သိပ်ကောင်းပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်ပီစီမှာ spyware ၀င်နေတာကို AVG ကသိနေ လို့ပါ။ နောက်တစ်မျိုးက ကိုယ့်ရဲ့ spyware က anti-spyware ကိုလက်မခံလို့ပါ။ ဒါဆိုရင်တော့ သတိကြီးကြီးနဲ့ ရှင်းလင်းပစ်ရပါလိမ့်မယ်။)
၁၈။ icon တွေကို desktop ပေါ်မှာအတင်းအကျပ် နေရာယူပြီဆိုရင် spyware ဖြစ်နေပါပြီ။ (ဆော့ဖ်ဝဲတိုင်းမှာ desktop icon shortcuts သဘောမျိုးဖန်တီးပေးပေမယ့် သုံးစွဲသူ ခွင့်မပြု ဘဲ နေရာ မယူတတ်ကြပါ။)
၁၉။ အချက်ပေးပုံသဏ္ဍာန်တွေ မှားယွင်နေတဲ့အခါ anti-spyware ဆော့ဖ်ဝဲလ်တွေဟာ ပြီးပြည့်စုံမှု မရှိပါ။ သူတို့ကိုရှင်းလင်း ပစ်တိုင်းမှာ uninstall ကို အသေအချာ ပြုလုပ်ပါ။ သဘောတရား အရပြောရရင် anti-spyware ဆော့ဖ်ဝဲလ် ကိုယ်က spyware တစ်ခုပါပဲ။
၂၀။ Remote Access Trojan ဆိုတာ virus လိုမျိုး။ program ငယ်ကလေး တစ်ခုကို ကွန်ပျူတာ စနစ်အတွင်း ကိုယ်မသိ လိုက်ရပါပဲ ၀င်ရောက်စေခဲ့ပြီး အဲဒီပရိုဂရမ်ကလေးဟာ ကိုယ်လုပ်နေ သမျှသတင်းအချက်တွေနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ကိစ္စ၀ိစ္စ မှန်သမျှကို ပိုင်ရှင် ဆီကို သတင်းပြန် လည်ပေးပို့နေလေ့ ရှိပါတယ်။
၂၁။ Drive-By Download ဆိုတာ အဓိက အားဖြင့် ပုဂ္ဂလိက အချက်အလက်တွေနဲ့ လုံခြုံမှုကို ထိပါးစော်ကားတဲ့ တိုက်ခိုက်မှုတစ်မျိုး ကို ခေါ်ဆိုပါတယ်။ တကယ်လို့ ကြော်ငြာ pop-up တွေကို သတိထားပြီး တားဆီးမယ်ဆိုရင် တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ခံရမှု မရှိနိုင်ပါ။ Pop-up blocker ပါဝင်တဲ့ firefox လို borwser မျိုးကို သုံးစွဲသင့်ပါတယ်။
၂၂။ Search bar တွေကို မယုံကြည်ပါနဲ့။ google.com နဲ့ google toolbar… Yahoo နဲ့  Yahoo toolbar တို့လို ယုံကြည်စိတ်ချ ရတဲ့ အရာတွေ ရှိနေပြီးတဲ့ အချိန်မှာ web ကို အထူး ရှာဖွေပေး မယ် ဆိုတဲ့ toolbar တွေကို ယုံကြည်ကိုးစား မနေပါနဲ့တော့။ www.google.com လို့ address bar မှာ ရိုက်လိုက်ရတာဟာ မရေရာ မသေချာတဲ့ toolbar တွေကို install လုပ်လိုက်နေတာထက် အများကြီး လုံခြုံမှုရှိပါတယ်။
၂၃။ ဒီနေရာကိုသွားပါ။ Virus နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အကောင်းအဆိုးတွေကို ပုံမှန် သတင်းပေးရင်း ကာကွယ် ဖို့နည်းလမ်းတွေကို အခမဲ့ ဖြန့်ချီနေ တဲ့ နေရာတွေ ရှိသလို အခု website တွေကတော့ spyware, adware, malware စတာတွေကို ရင်ဆိုင် ဖြေရှင်းဖို့ သတင်း တွေ၊ tools တွေ၊update new တွေ ရနိုင်ပါတယ်။
Posted By Blogger to လူဗိုလ်ဟူသည် ... at 3/13/2013 11:02:00 AM